Mac အတွက် Caliber Portable: သဟဇာတနှင့်လည်ပတ်ခြင်း eReaders အားလုံး
Eder Esteban | | caliber, Software များ
Caliber Portable သည် eReader ရှိအသုံးပြုသူများစွာသိကျွမ်းသောသို့မဟုတ်အကျွမ်းတဝင်ရှိသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။။ ထိုအကြောင်းပြချက်ကောင်းနှင့်အတူ, ဒီနေ့ငါတို့ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အသုံးဝင်ဆုံးအစီအစဉ်များတစ်ခုဖြစ်သည်ကြောင့်။ ဒီဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်သိရတာအဆင်ပြေပါတယ်။
Caliber Portable မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသမိုင်းနှင့်မကြာသေးမီကသင့်အားကျွန်ုပ်တို့အနည်းငယ်ပြောပြခဲ့သည်။ အလွန်အသုံးဝင်ဆုံးနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအစီအစဉ်တစ်ခု။ On ဒီ link ကို ငါတို့အရင်ငါတို့ပြောခဲ့ပြီးသောအကြောင်းအရာများအကြောင်းပိုမိုသိရှိနိုင်သည်။ ဒီနေ့ ကျွန်ုပ်တို့အစီအစဉ်အကြောင်းနှင့် Mac အတွက်မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုသင်ပိုမိုပြောပြပါမည်.
Caliber Portable သည်သင့်အတွက်ဘာလုပ်ပေးနိုင်သည်ကိုပထမ ဦး စွာသင်အနည်းငယ်ပြောပြပါ ဦး မည်။ ဒီတော့ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကူးတစ်ခုရတယ်။ နောက်ပိုင်းတွင် Mac ကွန်ပျူတာများနှင့်လိုက်ဖက်ညီမှုရှိခြင်းနှင့်မည်သို့ပရိုဂရမ်က၎င်းတို့အပေါ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်အနည်းငယ်ပြောပြလိမ့်မည်။
1 Caliber Portable ဆိုတာဘာလဲ။
2 Caliber Portable သည် Mac နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါသလား။
3 Caliber Portable သည်သင်၏ Mac တွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
4 Caliber Portable ကထိုက်တန်ရဲ့လား။
Caliber Portable ဆိုတာဘာလဲ။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်အရာများစွာကိုလုပ်နိုင်သောဆော့ (ဖ်) ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားတဖက်တွင်မူ, ကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတဲ့ eBooks အားလုံးကိုစုစည်းဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသူတို့ကိုစံနှုန်းမြောက်များစွာအပေါ် အခြေခံ၍ ရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်စုစည်းရန်ခွင့်ပြုခဲ့သောကြောင့်။ သူတို့ကိုခေါင်းစဉ်၊ စာရေးသူ၊ ISBN၊ ထုတ်ဝေသည့်နှစ်၊ ထုတ်ဝေသူများအရဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်သတ်မှတ်နိုင်သောစံများများစွာရှိသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့စုဆောင်းထားတဲ့ eBooks အားလုံးကိုစနစ်တကျစီစဉ်ထားတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်များစွာရှိပါကထိုနည်းဖြင့်သူတို့ကိုရှာရန်လွယ်ကူလိမ့်မည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Caliber Portable ကလဲကျွန်တော်တို့ကို format တွေပြောင်းခွင့်ပေးတယ်။ အထူးသဖြင့်အသုံးများဆုံး eBook အမျိုးအစားများအကြားဖိုင်များကိုမတူညီသောပုံစံများအကြားပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာ PDF, ePub, MOBI, txt နှင့်အခြားအရာများနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာဖတ်သူကိုလက်ခံရလွယ်ကူသည့်ပုံစံဖြင့်ဖိုင်များကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ဤပရိုဂရမ်၏ကြီးမားသောအသုံး ၀ င်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။
Caliber Portable သည် Mac နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါသလား။
ဤအစီအစဉ်၏ကြီးမားသောကောင်းကျိုးများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည် အားလုံးလည်ပတ်မှုစနစ်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်လူကြိုက်များသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် Mac ပါ ၀ င်သည် ဒီပရိုဂရမ်ကိုဖွင့်ပြီး Mac OS အတွက်ရတယ်။ ဒါကြောင့် Apple ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများသည်ဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။
၎င်းကို iPad သို့မဟုတ် iPhone ကဲ့သို့သောအခြားအက်ပလီကေးရှင်းများတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ iPad ကိုသင်၏ eReader အဖြစ်အသုံးပြုပါက၊ သင်ပရိုဂရမ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးစက်ထဲ၌သိမ်းထားသမျှအားလုံးကိုဤနည်းဖြင့်စုစည်းနိုင်သည်။ ဖုန်းနှင့်အတူတူပါပဲ Caliber Portable ကိုသင်ရွေးချယ်ထားသောကိရိယာပေါ်တွင် download လုပ်၍ ရနိုင်သည်။
Mac အတွက်ရရှိနိုင်တဲ့အပြင် အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုအလွန်မကြာခဏ update လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မှာနောက်ဆုံးပေါ်လုံခြုံရေးပြင်ဆင်မှုများအပြင်မိတ်ဆက်ပေးသည့်အင်္ဂါရပ်များသို့မဟုတ်တိုးတက်မှုအသစ်များအမြဲရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Calibre မှကမ်းလှမ်းထားသောအရာမှန်သမျှကိုလက်လွတ်မခံပါ။
ဒီပရိုဂရမ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် သူတို့က Caliber ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေလုပ်နိုင်တယ်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်းအမြဲရှိသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့တွေအရမ်းကြိုးစားရှာဖွေစရာမလိုဘူး။ Caliber Portable ကိုသင်၏ Mac ပေါ်တွင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုပါက၎င်းမှသင်လုပ်နိုင်သည် link ကို။ အဲဒီမှာသင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးဖြစ်ပါတယ် macOS အတွက်ဗားရှင်းကိုရွေးပါ.
Caliber Portable သည်သင်၏ Mac တွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
ဒါကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလိုက်နာရပါမယ်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘာမှလုပ်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ ပရိုဂရမ်ကိုမည်သည့်ဘာသာစကားဖြင့်အသုံးပြုလိုသည်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းရွေးချယ်ပါ နှင့်သိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်ရှိရာတည်နေရာ။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များစာရင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသည့် eReader အမျိုးအစားကိုရွေးပါ။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအမှတ်တံဆိပ်နဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုတောင်းတယ်။ ဒီရွေးချယ်ပြီးတာနဲ့ငါတို့အဆင်သင့်ဖြစ်ကြသည်။ Caliber Portable ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီ။
ဒီပရိုဂရမ်ကငါတို့စုဆောင်းထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေထည့်ဖို့ခွင့်ပြုတယ်။ အများဆုံးဖွယ်ရှိ, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုအလိုအလျှောက်သူတို့ကို detect လိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့စသုံးတဲ့အခါ၊ ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာငါတို့သိမ်းထားတဲ့စာအုပ်တွေထွက်လာလိမ့်မယ်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်စုစည်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ ထိပ်မှာပေါ်လာတဲ့ add book ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးစာအုပ်တွေထည့်နိုင်တယ်.
ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည့်စံနှုန်းများနှင့်အညီ၎င်းတို့ကိုစုစည်းနိုင်သည့်အတွက် eBooks ကိုစီစဉ်ခြင်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ ငါတို့အတွက်အဆင်ပြေဆုံးနည်းလမ်းပါ။ ePeader သို့ eBooks ပို့ရန်အစီအစဉ်ကခွင့်ပြုသည့်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်သည့် eBook ကိုသာရွေး။ eReader သို့ပို့ရန်ထိပ်ဆုံးရှိခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ဒါ့အပြင်ဒီ function ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်, Caliber Portable ကိုယ်တိုင်က eBook ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ device မှမှန်ကန်သော format သို့ပြောင်းရန်တာဝန်ယူလိမ့်မည်။ အမှန်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြောင်းလဲခြင်းကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်လိုပါသလားဟုကျွန်ုပ်တို့အားမေးလိမ့်မည်ဖြစ်သောသတိပေးအကွက်တစ်ခုရလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ပရိုဂရမ်ကိုယ်တိုင်ကဖိုင်ကိုအလိုအလျှောက်ပြောင်းလဲရန်တာ ၀ န်ယူလိမ့်မည်။
သော်လည်း ပရိုဂရမ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကို format များအကြားပြောင်းလဲရန်ထို option ကိုပေးသည်။ taskbar ရဲ့ညာဘက်အပေါ်ပိုင်းမှာဒီ option ရှိတယ်။ အဲဒီမှာ input နဲ့ output formats ကိုရွေးပြီးဖိုင်တစ်ခုကိုရိုးရိုးလေးပဲပြောင်းနိုင်တယ်။ စက်တစ်ခုထက်ပိုပြီးအလုပ်လုပ်လျှင်၎င်းသည်ရွေးချယ်စရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင် ကျနော်တို့ရရှိနိုင်ပုံစံများကိုများစွာသောအရေအတွက်ရှိသည် ထွက်သယ်ဆောင်ရန်အလို့ငှာကဆိုပါတယ်ပြောင်းလဲခြင်း။
Caliber Portable ကထိုက်တန်ရဲ့လား။
သင်အများစုသည်အစီအစဉ်ကိုသိပြီးဖြစ်လိမ့်မည်။ အမှန်တရားမှာစျေးကွက်အတွင်းခြေကုပ်ယူနိုင်ခြင်းသည်အဓိကအားဖြင့်၎င်း၏ဘက်စုံသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်အဆင်ပြေလွယ်ကူပြီးကျွန်ုပ်တို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးထားသည်။ တစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စာကြည့်တိုက်ကိုနှစ်သိမ့်မှုအပြည့်ဖြင့် စုစည်း၍ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောစည်းကမ်းချက်များကို အခြေခံ၍ တည်ဆောက်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုဆုံးဖြတ်တယ်။
ဒါကြောင့်သံသယမရှိဘဲ Caliber Portable သည်သင်၏ Mac တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် MacOS နှင့် iPad ကဲ့သို့သောအခြားပစ္စည်းများနှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြောင်းသေချာပါသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကသင့်ရဲ့ Apple Device အားလုံးနဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့, သင်ကနောင်တရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » Software များ » caliber » Portable Caliber: Mac နဲ့သဟဇာတလား။ ဒါကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်သလဲ?
Caliber သည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ဥပမာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါစာကြည့်တိုက်ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ပိုကောင်းပြီးပိုပြည့်စုံသောအစီအစဉ်ကိုမသိရပါဘူး။
ဤဆောင်းပါး၌ရှုပ်ထွေးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သောအသုံးအနှုန်းရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ပရိုဂရမ်၏အစစ်အမှန်အမည်မှာ CALIBER ဖြစ်ပြီး၎င်းစာတန်းထိုးမှာ“ ebook စီမံခန့်ခွဲမှု” ဖြစ်သည်။ ဘယ်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါသလဲ
hard disk ပေါ်တွင် Windows Vista၊ ၇၊ ၈ နှင့် ၁၀ (၃၂-bit) နှင့်“ Portable” ဗားရှင်း (PenDrive သို့မဟုတ်အခြားပြင်ပမှတ်ဉာဏ်တွင်) တွင်သုံးနိုင်သည်။
Windows Vista၊ ၇၊ ၈ နှင့် ၁၀ (၆၄ bit)
Linux (32 နှင့် 64 bits အတွက်တူညီသည်)
နောက်ပိုင်းတွင် macOS 10.9 (Mavericks) ။
ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်၎င်းကို Windows7နှင့် portable အပြင် Ubuntu အောက်တွင်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
စွမ်းအင် eReader မက်စ်၏သုံးသပ်ချက်